FAQ | Tianjin Yixin Pipe Equipment Co., Ltd.
P. Nahoana no antsoina hoe milina fantsom-pandrefesana mandeha ho azy?
A: Izy io dia afaka mahatsapa welding mandeha ho azy amin'ny toerana misy ny fantsona, toy ny fantson-tànana ambony, fantsom-bozaka, fametahana mitsivalana, fantsom-bozaka, fantsom-boasary boribory sns. Izy io no milina fantsom-pandrosoana mandroso ankehitriny. Ny fantsona dia raikitra na mihodina, ary ny trolley welding dia afaka mihetsika tsy miankina mba hahatsapa welding mandeha ho azy.
Q. Inona avy ny savaivain'ny fantsom-pandrefesana sy ny hatevin'ny rindrina?
A: Mety amin'ny savaivon'ny fantsom-pifandraisana ambonin'ny 114mm sy ny hatevin'ny rindrina 5-50mm (HW-ZD-200 dia mety hampidirina rindrina matevina 5-100mm).
Q. Mety ho hitan'ny taratra X sy ny ultrasonic ve ny las?
A: Eny, mila GTAW amin'ny tanana ianao ho faka, ny fitaovantsika dia afaka mameno sy misoratra azy ho azy. Ny fizotran'ny welding dia mifanaraka amin'ny fanaraha-maso toy ny fahitana ny lesoka sy ny fakana sary.
Q. Inona avy ireo configurations an'ny fitaovana rehetra?
A: Ny trolley welding automatiquement an'ny laharana fahadimy, loharano azo avy amin'ny herinaratra nafarana, mpamatsy tariby, mpanaraha-maso tsy misy tariby, fanilo fanilo ary tariby hafa (YX-150 PRO sy HW-ZD-200 dia nampiditra ny trolley welding tamin'ny feeder welding).
Q. Afaka milina avy ao amin'ny rindrina anatiny ve ilay masinina?
A: Eny, ny savaivon'ny fantsom-pire dia mila mihoatra ny 1 metatra, na ny savaivon'ny fantsom-batsy dia ampy hidiran'ny mpandraharaha amin'ny fantsona.
Q. Inona avy ireo tariby sy lasantsy ampiasaina amin'ny fizotran'ny welding?
A: Izy io dia arovan'ny gazy gazy karbonika 100% na gazy mifangaro (80% argon + 20% carbon dioxide), ary ny tariby vy dia matevina matevina na voadio.
Q. Inona avy ireo tombony azo ampitahaina amin'ny welding amin'ny tanana?
A: ny fahombiazany dia mety ho avo kokoa noho ny 3-4 welders; ny seam lasitra dia niforona tsara tarehy; ambany ny fanjifana ny fanjifana. Na ny welder miaraka amin'ny fampahalalana fototra momba ny fikajiana aza dia afaka mampandeha azy tsara, mamonjy ny vidin'ny fanakaramana welders matihanina marobe amin'ny vidiny lafo.
Q. Moa ve mahatohitra ny hafanana ambony ny kodiarana manety an'ny kodiarana welding? Inona ny herin'ny adsorption?
A: Izahay dia nanandrana tamin'ny tontolo iainana maripana 300 °, ary tsy nisy ny fihenan'ny magnetika, ary ny hery manintona andriamby dia mbola afaka mitazona 50kg.
Q. Ahoana ny famolavolana fantsona ambony?
A: Ny fantson-tànana any ambony no karazan-welding mafy indrindra amin'ireo toerana efatra fehin-kibo. Izy io dia manana fepetra avo lenta indrindra amin'ny fifehezana ny vy anidina, indrindra ho an'ny welding eo amboniny ambany. Ny tahan'ny mari-pahaizana sy ny fananganana dia fahasahiranana ara-teknika. Ny fitaovana fantsom-pandrefesana mandeha ho azy Yixin dia afaka mamaha ireo olana mifandraika amin'izany, ary tsara tarehy ny endriny ary avo ny tahan'ny mahay.
Q. Iza amin'ireo fepetra miasa mety amin'ny fantsom-bozaka mandeha ho azy?
A: Azo ampiharina ny asa fananganana anatiny na an-tsaha (eo an-toerana); fantsona matevina amin'ny rindrina, fantsona goavambe, fantsom-by vy, fantsom-bozaka, fehin-kiho, fehin-kibo anatiny, fantsona ivelany, fantsona marindrano, sns.
Q. Azo ampiasaina amin'ny tontolo iainana masiaka ve izy io?
A: Eny, matanjaka sy mateza izy io, mety indrindra ho an'ny tontolo iainana miasa mafy amin'ny injenieran'ny fantsona.
Q. Mora miasa ve ny fitaovana? Ahoana no hampiofana?
A: Mety ny fametrahana ary tsotra ny fandidiana. Azonao atao ny manomboka ao anatin'ny 1-2 andro raha manana welder fototra ianao. Afaka manome fiofanana an-tserasera na koa fiofanana sy fitarihana eo an-toerana isika.
Q. Misy fepetra takiana amin'ny tontolon'ny asa ve?
A: ny toerana iasana dia mitaky toerana 300mm manodidina ny fantsona. Misy sosona na sosona fisorohana eo ivelan'ny fantsom-pifandraisana, asaina manaingo ny làlana. Ho an'ireo fantsona misy savaivony fantsona lehibe kokoa noho ny 1000mm dia ilaina ihany koa ny manamboatra ny làlana, mihazakazaka misimisy kokoa ny trolley, ary avo kokoa ny kalitaon'ny welding.
Q. Azo ahodina ve ny vatan'ny tanky? Afaka miarina ve ny fantsona marindrano amin'ny fantsona?
A: Eny, azo atao ny mihary na mitsivalana na mitsivalana.
P. Inona avy ireo fitaovana azo ampiasaina sy anaovana fampiasa matetika?
A: Fanjifana: tariby welding (tariby fanamafisam-peo fototra na tariby miorina amin'ny flux), gazy (gazy karbonika na gazy mifangaro); faritra mora tohina: torohevitra mifandraika, fantsom-panafody sns. (misy amin'ny tsenan'ny fitaovana avokoa ny faritra mahazatra rehetra).
F: Karazan-tariby inona no ampiasainao? (savaivony, karazany)
A: tariby fllux: 0.8-1.2mm
F: Misy milina miatrika fantsom-bolo ilaina amin'ny fanomanana bolongana fantsona?
A: Aza mila.
F: Ho an'ny fantsom-panafody, karazana mpiray iza no takiana (U / J double J / V na tonta bevel?)
Q. Inona ny habetsahana sy ny lanjan'ny trolley welding?
A: ny trolley welding dia 230mm * 140mm * 120mm, ary ny lanjan'ny trolley dia 11kg. Ny endriny ankapobeny dia maivana sy malefaka entina / miasa.
Q. Inona ny hafainganan'ny hafainganam-pandeha sy ny sakan'ny trolley welding?
A: ny hafainganam-pandeha dia azo ovaina tsy an-kijanona amin'ny 0-100, ary ny sakany savony dia azo ovaina tsy an-kijanona avy amin'ny 2mm-30mm.
Q. Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny fitaovana fanamafisam-peo fantsona Yixin?
A: Nifantoka tamin'ny R&D sy ny famokarana fitaovana fantsom-pahefana mandeha ho azy ny orinasa nandritra ny 12 taona mahery, ary nandalo ny fitsapana nataon'ny mpanjifa sy ny tsena. Ny vokatra dia nandalo fanavaozana 5 taranaka. Ny fahombiazan'ny fitaovana fantson-drano vaovao dia miorina, avo ny tahan'ny mari-pahaizana, ary tsara ny seam seam. Betsaka ny mpaka tahaka eny an-tsena. Azafady mba sokafy ny masonao ary ampitahao ny kalitao.
mila vahaolana namboarina?